WST-001-2-S Outoor Kitchen Garden Barbecue New Yakagadzirwa Stainless Steel BBQ Gasi Gasi Girazi nefrigerator | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
Steak / Pizza Gadzira
Gasi griddle / teppanyaki
Wst-001-5-1 Pamusoro Kutengesa Kunze Kwekunze Kicheni Yemahara Kumira Stainless Steel Commercial Kitchen Cabinet uye BBQ Grill
Wst-CF2 Outdoor Kitchen Combo Hell Kushambadzira Tsika Size Saizi Stainless Simbi BBQ Outdoor Kitchen Cabinet Fitchen Cabinet Fitchen Cabinet Stopage Cabinet Firchen Stoge Cabinet Fild
WST-001-2-1 China Guta Rinogadzira Tsika Stainless Steel BBQ Grill Korea Outdoor Kitchen Barchue Gasi Gaka Gil
WST-001-2-1-S CUSTOREOR KITCHEN CITCH Bindu Barbecue New Yakagadzirwa Stainless Steel BBQ Gasi Gasi Girazi nefiriji
WST-001-2-S Outoor Kitchen Garden Barbecue New Yakagadzirwa Stainless Steel BBQ Gasi Gasi Girazi nefrigerator
1.6 Burners, 1 Side Burner, Plus 1 Infrared Back Burner
Yese 900BBTU yekubheka simba inopa mabasa eGrill, utsi, braise, yakabikwa, roast panguva imwe chete, uye inowana kunyange kupisa uye juicy flavour
2.Heavy Duty Yakakwana Stainless kaviri-layer lid yekupisa
Yakavakirwa-mu thermometer inovimbisa chaiyo grillone zone tembiricha kuyerwa
3.Mone parutivi kupisa
inopa imwe prep uye nzvimbo yebasa
4.Blue-lit control knobs uye yemukati halogen magetsi
Iwe unogona kunakidzwa neBarbecue kunyangwe muusiku hwakasviba
5.Ny otomatiki 360 ° Rotisserie
Chaizvoizvo Heat saka chikafu hachisi nyore kupiswa
6.cabinets ine stainless simbi magonhi
Zvekuchengetedza bbq zvishandiso uye liquified gasi bhodhoro
Runhare: +86 760 86337286
Nzvimbo yekubika 960 * 455mm
Kupisa kunobuda 90000BTU / 30.5KW
Kusimuka Piezo Igniton
Motor Output 4w (220-2440V, AC50HZ), 2.5ORI3R / min
Kuvaka Simbi isina tsvina uye granite
Kuita Yakavakwa-muGrill 26.7KW, Side Burner 3.9KW
FIRIJI 68L, 220-240V / 50H,
Zvinhu # 304/430 stainless simbi
Chimiro Zvakareruka zvakareruka, zvicheneswa nyore
Application Bindu / Party / Kunze
Chengetedzo Chishandiso Flame yekuchengetedza kifaa
Kupedzisa Matte maitiro
Mhando yegesi LPG
Basa BBQ, STEAK GAR, huku roast
Tembiricha 350 ℃
Kuona hwindo kutsamwa kwegirazi
Rotisserie set rotisserie tsvimbo, rotisserie prong, rotisserie mota
Kubika Grids 8mm stainless simbi, 3PCS
Drip Tray 2PCs, simbi isina tsvina
Kupisa kupisa Mavharuvha ane 180 ° Control
Mwenje Yakavakwa-muHalogen Chiedza 2PCS uye LED Knob Light 6PCS
Kabhinari 2 dhirowa uye 3 Scours Door
◪ Eclatal inyanzvi yekugadzira muBBQ Grill / Gasi Gasi / Pizza Ovns / Charcoal Gills / Offset Sporker / Moto Mipoti uye BBQ Zvipfeko zvinopfuura makore gumi nemashanu.
◪ Isu tinopa ese oem& ODM Services, 4-7 mazuva ekushanda e samples attime.
◪Isu tine yakakwana mhando manejimendi system. Isu tinogona kupa zvakarongwa zvinokurudzira zvigadzirwa& Zvirevo zviri nani zvekushambadzira.
◪ Isu tine zvizere zvitupa zvinosanganisira en1860-1, GS, LFGB, CE, nezvimwewo.
◪ Tinogona kupa iyo inotevera-kutengesa uye pa-line masevhisi, uye ipa mutengo wekutengesa kuti usangane nechikumbiro chako.
1. Ndezvipi zvigadzirwa zvaungave nazvo?
Tinogona kuburitsa kutengeserana barbecue grill, yakavakirwa-grill, gasi grill, charcoal grill, grill grill, grill grill, kunze kicheni, pizza uye steak getrserie uye zvichingodaro.
2. Iwe unogona kuburitsa zvinoenderana nesamples kana dhizaini?
Ehe, isu tinogona kuburitsa zvinoenderana nesamples kana technical dialnings. Tine r&D timu inopfuura makore gumi emakore muBBQ Area.
Kazhinji, isu tinogamuchira t / t, trevovetsable l / c a asco. Kwemagariro wenguva dzose, tinogamuchira T / T 30% dhipoziti neP.O., chiyero kuti tirongere pamberi pekutumirwa.
4. Ndeipi nguva yako inotungamira ye sample uye kugadzirwa?
Semuenzaniso, zvinowanzotora mazuva 7-15. Zvekugadzira kurongeka, zvinowanzotora mazuva makumi mana nemakumi mana nemashanu mushure mekuratidzwa kwemuenzaniso uye kugamuchira yako yekumberi kubhadhara. Iyo chaiyo yekutumira nguva inoenderana nezvinhu uye huwandu hweyako oda.
5. Ndeipi yako general kurongedza zvigadzirwa?
Isu tinowanzo kurongedza zvigadzirwa ne standard yakagadziridzwa carton bhokisi uye bhokisi rematanda. Isu tinogona zvakare kurongedza nenzira zvichienderana nekutenda kwevatengi.
6. Ndeapi mazwi ako ekutakura?
Isu tinobvuma Exw, FOB, Cif, Cif, etc. Iwe unogona kusarudza iyo iyo ndiyo yakanyanya nyore kana mutengo unoshanda kwauri.
7. Nguva yakareba sei iyo hupenyu hwezvigadzirwa zvako?
Makore matatu kana zvigadzirwa zvichishandisa nenzira kwayo uye chitoro nemazvo.
8. Inguva yakareba sei iyo waranti yezvigadzirwa zvako? Ko kana paine chero zvikamu zvakaputsika?
Yedu waranti ndeye gore rimwe. Mukati mewaranti, iyo yakaputsika inogona kutsiviwa zvakasununguka.
9. Ndingawana rini mutengo?
Mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekuwana yako yakatarwa kubvunza. Kana iwe uri mukukurumidzira, ndapota tumira email kwatiri kana kusiya meseji pane mutengesi murudo, kuti tigone kukupindura nenguva.
10. Ndingaite sei kuti ndiwane muenzaniso wekutarisa hunhu hwako?
Mushure mekusimbiswa kwemutengo, iwe unogona kuda samples kuti utarise hunhu hwedu. Kana iwe uchida samples neako logo, dhizaini, nezvimwe, ndapota tendera izvi kwatiri, saka tinokupa iwe nemubhadharo we sampula. Kazhinji sampule mubhadharo wakapetwa kaviri mutengo wemutengo wehuwandu. Kudzoka kwemari yemuenzaniso kunoenderana nehuwandu hwehuwandu hwekurongeka. Huwandu hwekurongeka hunofunga kuti mubhadharo wechiMuenzaniso wose unodzoka kana ingodzosera hafu.